शीर्ष नेताको चुनावी तयारी, को कहाँबाट लड्ने तयारी गर्दैछन् ? - Deshko News Deshko News शीर्ष नेताको चुनावी तयारी, को कहाँबाट लड्ने तयारी गर्दैछन् ? - Deshko News
शीर्ष नेताको चुनावी तयारी, को कहाँबाट लड्ने तयारी गर्दैछन् ?
निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै दलहरूले निर्वाचनका लागि तयारी थालेका छन्। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पूर्वमहामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह काठमाडौं १, कृष्ण सिटौला झापा ३, डा। शेखर कोइराला मोरङ ७, विमलेन्द्र निधि धनुषा ३, अर्जुननरसिंह केसी नुवाकोट १, डा। रामशरण महत नुवाकोट ३, गगन थापा काठमाडौं ४ बाट निर्वाचन लडेर निर्वाचन जितेका थिए ।